Shilalekha » ज्योति लाइफको आईपीओ भर्नुभयो ? आवेदन दिने आज अन्तिम दिन ज्योति लाइफको आईपीओ भर्नुभयो ? आवेदन दिने आज अन्तिम दिन – Shilalekha
ज्योति लाइफको आईपीओ भर्नुभयो ? आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०७:३०
काठमाडौं । ज्योति लाईफ इस्योरेन्सको आईपीओ भर्नुभयो ? आज अर्थात फागुन २६ गते बुधबार आवेदन दिने अन्तिम दिन रहेको छ । फागुन २१ गते शुक्रबारदेखि विक्री खुला गरिएको कम्पनीको आईपीओमा मंगलबारसम्म करिब १६ लाख आवेदन परेको छ ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार साझ ५ बजेसम्म यी आवेदकहरुबाट २ करोड ९८ लाख ७७ हजार ५४० कित्ता शेयर खरिद माग भएको हो । जुन मागभन्दा ५.६३ गुणा बढी हुन आउँछ ।